Mayelana NATHI - Awiner Biotech Co., Ltd.
I-Awiner Biotech yasungulwa ngo-2006,etholakala enyakatho neChina-Shijiazhuang, esifundazweni sase-Hebei.Umuzi useduze nokaputeni wethu uBeijing, ezokuthutha zilula.U-Awiner Biotech uzibophezele ekucwaningeni, ekukhiqizeni nasekusabalaliseni ama-agrochemicals. ikakhulu ibhekana nezibulala-zinambuzane, ukhula lokubulala ukhula, isikhunta, isilawuli sokukhula kwezitshalo kanye nemithi yokubulala izinambuzane yomphakathi.
Kuze kube manje, sinamakhasimende e-Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Libya, Syria, Turkey, Yemen, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile, Bolivia, Mexico, Brazil, Paraguay, Nigeria, Djibouti, eRwanda. , Somalia, Malaysia, Cambodia, Nepal, Myanmar njalonjalo.
Amazwe ethu abamba iqhaza kulo mbukiso yiTurkey, Iran, Pakistan, Nigeria, Russia, Cambodia, Malaysia, Uzbekistan, njll.
Ucwaningo lwemakethe yamakhasimende
Siya ezweni lekhasimende ukuyohlola izimakethe, sibahlaziyele futhi sibaxazululele izinkinga, siqonde ukusetshenziswa komkhiqizo wabo, futhi namakhasimende azosivakashela
1.One Stop ukuthenga Umsizi.
ungathola konke ukwakheka:
I-WDG, EC, SC, SL ....
i-pesticide, herbicide, fungicide ....
asikho isidingo sokukhuluma namanye amafemu.
Ukuqoqa wonke amanani avela emafemini ahlukahlukene nokunikeza amanani aphansi kakhulu kumakhasimende. Ukwenza ukubala kwamasenti ngamakhasimende
Isikhathi eside ukubambisana nobudlelwano obuhle nezimboni kusisiza ukuba sithole izimpahla nokulethwa ngesikhathi.
Ungathola imfundo yobungcweti kusuka ku-specilist ye-agrochemical, ngaphezu kwezibulala-zinambuzane uqobo.
Le nkampani inezindlela zokuhlola umkhiqizo eziphelele nezinsimbi zokuhlola ezithuthukile: i-chromatography engamanzi ephezulu,
i-chromatography yegesi, i-laser analyzer yokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana, ibhalansi ehlaziya kakhulu, ukucubungula umswakama, njll.
Ukungena ngaphakathi nokuphumayo, ukuhlaziywa kwe-batch nokutholwa kufinyelela ku-100%
2.Sisebenzisa ithimba lokuklama ukupakisha eliqeqeshiwe kanye nabahloli bekhwalithi abanolwazi ukuhlangabezana nokucubungula okuhlukahlukene kwamakhasimende futhi
izidingo zokupakisha ngamazinga aphezulu.
Izinkomba zomkhiqizo sezifinyelele noma zeqa izindinganiso ze-FAO nakwamanye amazwe, futhi zanqoba ngazwi linye
ukuphawula okuvela kumakhasimende, kunikeza isiqinisekiso esiqinile sokusekelwa kwamakhasimende.
5, Samukela ukuhlolwa kwe-SGS kuyo yonke imikhiqizo!
Ukuhlola kwangaphambi kokuthunyelwa
1.Bheka ukuthi kukhona yini ukulimala kwebhokisi, ukuvuza kwamabhodlela, njll izinkinga lapho izimpahla zifika ethekwini.
2.Check amanani amabhokisi ukuqinisekisa akukho amabhokisi ulahlekile.
3.Chech Ukuthi imikhiqizo yokuphromotha, izipho, amasampula, njll amakhasimende afakwe konke alayishiwe, akukho okulahlekile.
4.Bheka ukuthi ngabe kukhona umbhalo noma uphawu lokuphrinta ebhokisini olungahambisani nokuvunyelwa kwamakhasimende noma okwandisa ubungozi bokuhlolwa.
Ukuhlolwa kwamakhasimende okucaciswe eceleni
1.SGS izibonelo zalokho ukuhlolwa ngaphambi mpahla
Faka amakhasimende esikhundleni sokuhlolwa kwechweba
Kususelwa ekuzihloleni ngokwakho
1.Lungiselela iselula noma ikhamera enezinqumo eziphezulu.
Thatha izithombe bese uhlela imininingwane ukuze uyithumele kumakhasimende nge-imeyili noma ngamathuluzi wokuxhumana.
Ama-APP aphathekayo angama-3.Live angasetshenziselwa ukubiza amakhasimende ividiyo nokusakaza isimo sokulayisha kwikhasimende.
Ngemuva kokuhamba komkhumbi
1. Sizolandelela imininingwane yesitsha njalo.
2. Sizokukhumbuza ngesikhathi esifanele ngaphambi kokuba umkhumbi ufike ethekwini
3. Sizolandelela uma izimpahla zonakalisiwe noma zingahambi.
4. sizokulungiselela isifinyezo se-oda, kusuka sithola uphenyo lwakho uku-oda kuphelile.
Ngemuva kokuthi i-oda seliphothuliwe, sizoba nomhlangano ofingqiwe, ukufingqa isipiliyoni, izinkinga okuhlangatshezwane nazo nezidingo ezikhethekile zamakhasimende, ukulungiselela ukubambisana okulandelayo.
Yonke imiklamo yelebula namasampula kuzogcinwa.
3.Siyabonga kakhulu uma ikhasimende lingabeka imibono neziphakamiso ngale oda nasensizakalweni yethu, sikhombe amaphutha, sizothuthuka ngokuzayo.
Bheka phambili ekubambisaneni okulandelayo uma unelisekile ngemikhiqizo kanye nezinsizakalo zethu
Ungayixazulula kanjani uma kunenkinga ngezimpahla.
Ikhasimende lizohlinzeka ngombiko wesithathu wokuhlola, okwamanje sizohlola isampula yezimpahla. Uma empeleni kukhona okungahambi kahle ngekhwalithi njengokuqukethwe akwanele, inkampani yethu inesibopho ngokuphelele.
Uma kunenkinga yokuvuza lapho ikhasimende lithatha izimpahla ethekwini, inkampani yethu inesibopho
Izimpahla zilethwa ethekwini izinsuku eziyi-15, futhi ukupakisha kudaluliwe, konakele, njll. Inkampani yethu inesibopho
Sicela unikeze izithombe nevidiyo
(Sicela ungakhathazeki ngekhwalithi yemikhiqizo yethu, sinokulawula okuqinile kwekhwalithi nohlelo lokuhlola. Zonke izimpahla zizohlolwa ngaphambi kokuthunyelwa zisuka efektri.)
I-Captan 95% TC, I-Azoxystrobin 20% WDG, IBifenthrin 25g / l EC, I-Carbofuran 97% TC, ICyproconazole 40% WDG, I-Amitraz 12.5% ​​EC,